बर्मा, एक अद्भुत गन्तव्य र पर्यटन द्वारा कम शोषण | Absolut यात्रा
बर्मा छ दक्षिण पूर्व एशिया, सीमानाको साथ, अन्य देशहरूको माझमा चीनeभारत, क्षेत्र को दुई दिग्गजहरु। यद्यपि म्यानमारको, यो पनि ज्ञात छ, यो सानो छैन, किनकि यो लगभग सात लाख वर्ग किलोमीटर छ।
यस्तो विस्तृत क्षेत्रमा तपाईसँग धेरै चीजहरू देख्न सकिन्छ। त्यहाँ तपाईंको राजधानीको रूपमा ठूला शहरहरू छन्, यांगुन, तर साना साना शहरहरू पनि समयमै रोकिन्छन्। त्यस्तै, यो छ राजसी मन्दिरहरू, तर पनि संग अद्भुत परिदृश्य र हिमाली मार्गहरू। थप रूपमा, यो कडा बौद्ध प्रभावको देश हो जुन धेरै पहिले पर्यटनको लागि खोलिएको छ। यदि तपाईं बर्माको बारेमा अलि बढी जान्न चाहानुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई पढ्न जारी राख्न हौसला दिन्छौं।
1 बर्मामा के हेर्ने
1.1 Yangon, देश को पूर्व राजधानी
1.3 बागान, बर्माको मन्दिरहरूको शहर
1.4 मन्डले, अर्को बर्मी आश्चर्य
1.5 Hsipaw, एक वैकल्पिक भ्रमण
1.6 कक्कु स्तूप वन
1.7 Inle तालिका, बर्मामा एक जादुई स्थान
1.8 माउन्ट पोपा र यसको मठ
1.9 नगापालीको समुद्री तट, कम ज्ञात बर्मा
2 यो कहिले राम्रो हुन्छ एशियाई देशको लागि यात्रा गर्न
3 बर्मामा के खान गर्ने
4 बर्मा कसरी पुग्ने
बर्मामा के हेर्ने
हामीले भर्खर तपाईलाई भनेको भनेको के हो भने, म्यानमार पर्यटन दृष्टिकोणबाट हिरा हो। यो तुलनात्मक रूपमा हालसालै भएको छ कि यो सामेल भएको छ दक्षिण पूर्व एशियामा सर्किटहरू र यसको स्मारक र प्राकृतिक दृश्यहरु अझै पनि एक बर्ष लाखौं मानिस प्राप्त गर्दैन। जे भए पनि, हामी तपाईंलाई केही राम्रो देखाउन जाँदैछौं।
Yangon, देश को पूर्व राजधानी
Million० लाख भन्दा बढी जनसंख्या भएको यो जनसंख्या सहर २०० 2005 सम्म बर्माको राजधानी थियो र यस देशमा प्रवेशको मुख्य बिन्दु अझै जारी छ। यद्यपि यो कुनै खास सुन्दर शहर होइन, यदि हामी अरूसँग तुलना गरौं भने।
जे भए पनि यसमा तपाईले भ्रमण गर्नु पर्ने चीजहरू छन्। यो धार्मिक परिसरको मामला हो श्वाडगन, जुन उही नामको प्यागोडा बाहिर खडा छ। यो एक दर्शनीय स्तूप हो (बर्मामा उनीहरूलाई भनिन्छ जोकर) एक सय मिटर अग्लो र सुनले नुहायो। यद्यपि पौराणिक कथाले यसलाई २,2500०० वर्ष पुरानो दिन्छ, विज्ञहरूले यसलाई हाम्रो युगको XNUMXth औं र १० औं शताब्दीको बीचमा मिति दिन्छन्। बौद्ध धर्मको दृष्टिकोणबाट यो देशमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसका आफ्नै अवशेषहरू छन् बुद्ध.
यो केवल स्तूप मात्र होइन तपाईले र Rang्गुनमा देख्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईंलाई यो भ्रमण गर्न सल्लाह दिन्छौं सुले प्यागोडाआकारमा अष्टभुज र समान सुनहरा गुम्बज, वा चौखट्टगी प्यागोडा, जुन बुद्धको विशाल आकृति राख्छ, जसमा यो हुन्छ paya Ngahtatgyi.
जबकि यो छ प्रशासनिक राजधानी २०० 2005 देखि बर्माबाट, हामी यसलाई यहाँ सिफारिसको रूपमा समावेश गर्दैनौं, तर किनकि यो एक जिज्ञासा हो। यो ग्रामीण क्षेत्रमा कृत्रिम रूपमा सिर्जना गरिएको थियो र भनिन्छ यो क्षेत्र न्यु योर्कको भन्दा छ गुणा बढी ढाक्छ। तथापि, यो छ धेरै सानो जनसंख्या। वास्तवमा त्यहाँका बासिन्दाहरूको संख्या अज्ञात छ, यद्यपि यो एक मिलियनको अनुमानित छ, जुन यत्तिको ठूलो ठाउँको लागि केहि छैन। हामी तपाईंलाई यसको भ्रमण गर्न सल्लाह दिदैनौं, तर यदि तपाईंले त्यसो गर्नुभयो भने विशाल बौद्ध स्तूप अवश्य अवश्य देख्नुहोला उप्पटसन्ति.
बागान, बर्माको मन्दिरहरूको शहर
देशको मुख्य पठारमा अवस्थित, किनारमा इरावाडी नदी, हालै घोषणा गरिएको छ विश्व सम्पदा यसको अद्भुत मन्दिरहरूका लागि। भनिन्छ कि त्यहाँ चार हजार जना छन्, तर तपाईले एक अत्यावश्यक तरिकामा भ्रमण गर्नुपर्दछ ती हुन् आनंद, एघारौं शताब्दीबाट र बोलाइएको "बर्मी वेस्टमिन्स्टर अबे" यसको महिमाको लागि; सुलेमानी, XII बाट र जसको अनुवादको अर्थ हो "मुकुटमा रत्न"; धम्म्याy्गी, यसको खैरो र color्गको लागि कुनै क्षेत्रमा तिनीहरू लगभग सबै सुनौलो छन्, र श्वेजिगनचार जोकरहरूद्वारा घेरिएको जुन प्रत्येकमा बुद्धको छवि छ।
मन्डले, अर्को बर्मी आश्चर्य
बर्माको तपाईको यात्रामा अर्को आवश्यक भ्रमण भनेको मंडालेको शहर हो, जसको ईभोक्याटिभ नाम तपाईले देख्न सक्ने सबैको पूर्वावलोकन हो। सुरु गर्नका लागि, यसको पुरानो शहरको साँघुरो सडकहरूमा हराउनुहोस्, हलचल र बारहरूले भरिएको।
तर सबै भन्दा माथि, बहुमूल्य भ्रमण गर्नुहोस् मन्डले प्यालेस, जहाँ देश को अन्तिम राजा बस्थे। यो गढी भित्र अवस्थित छ र १ th औं शताब्दीमा बनाइएको थियो। यसमा विभिन्न भवनहरू छन् जसमा ओभरल्यापि roof छप्परहरू छन् र, किस्साको रूपमा, हामी तपाईंलाई बताउँछौं कि प्रत्येक निर्माणमा उनीहरूको संख्याले यसको महत्त्व दर्साउँछ।
तपाईं मन्डले देख्नु पर्छ भव्य महामुनी मन्दिर, जो बुद्ध को कुनै कम प्रभाव पार्ने आंकडा घर छ। पौराणिक कथा र उपाख्यानहरूको साथ जारी राख्दै, हामी तपाईंलाई यो बताउँदछौं कि यो मानिन्छ केवल सही प्रतिलिपि संसारमा उहाँको अस्तित्व छ।
अन्तमा, यदि तपाईं यसको 1700 चरणहरू चढ्नको लागि आफैलाई सक्षम पाउनुहुन्छ भने, आउनुहोस् मांडला हिल, जहाँबाट तपाईले शहरको भव्य दृश्यहरू पाउनुहुनेछ।
Hsipaw, एक वैकल्पिक भ्रमण
यो मन्डले देखि ठीक छ कि म्यानमारको सब भन्दा राम्रा रेल यात्रा, मात्र साहसीका लागि उपयुक्त। यो शहर पुग्छ लाशियो, तर यसको प्रभावशाली परिदृश्यको लागि खडा छ र, सबै भन्दा माथि, यसको लागि Gokteik viadक्टसतहबाट लगभग सात सय मिटर एक नाजुक धातु संरचना।
ट्रेन पनि शहर मा रोकिन्छ Hsipaw, जसले तपाईंलाई बर्मामा पर्यटक सर्किट बाहिर वैकल्पिक भ्रमण प्रस्ताव गर्दछ। यस शहरमा तपाईं एशियाई देशका बासिन्दाहरूको दैनिक जीवन कस्तो छ देख्नुहुनेछ र तपाईं लिटल बागान पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, शान दरबार र मुस्लिम मस्जिद। तर सबै भन्दा माथि, माथि जानुहोस् पाँच बुद्धको पहाडी, जहाँबाट तपाईं एक शानदार सूर्यास्त सराहना गर्नु हुनेछ।
कक्कु स्तूप वन
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, सबै बर्मा मन्दिर र स्तूपहरूले भरिएका छन्। तर यदि तपाईं एशियाली देशमा साँच्चै अनौंठो परिदृश्य हेर्न चाहनुहुन्छ भने स्टुपा वनको भ्रमण गर्नुहोस् कक्कू। यो २ walk०० साना जोकरहरू द्वारा बनाईएको एउटा विशाल पैदल यात्रा हो, प्रत्येक बुद्धको आकृतिसहित, यसले तपाईंलाई वास्तवमै प्रभावित पार्नेछ।
Inle तालिका, बर्मामा एक जादुई स्थान
मा अवस्थित शान हिमालहरू लगभग नौ सय मिटर उचाईमा, यो ताललाई नेभिगेट गर्नु जादुई छ। सुरु गर्नका लागि, यो नदी जस्तो देखिन्छ, सय किलोमिटर मात्र लामो चौडाइ भएको। तर यसका साथै यसका बैंकहरूमा पनि छन् दुई सय गाउँहरू जसका बासिन्दाहरू, इन्था (o "तालका छोराहरू"), सबै परम्परागत बर्मी आकर्षण कायम राख्नुहोस्।
माउन्ट पोपा र यसको मठ
अर्को स्थान भित्रै रहस्यवाद यो माउंट पोपा हो। तपाईले उसलाई देख्नुभयो भनेर पर्याप्त छ, मैदानमा एकाकी, तपाईंले हाम्रो अर्थ के हो भनेर बुझ्नको लागि। थप रूपमा, यसको शीर्षमा सुन्दर छ ताung कलाट मठ, जुन जादुई त्यहाँ राखिएको छ जस्तो देखिन्छ।
शीर्षमा चढ्नको लागि तपाईं 777 stepsXNUMX चरणहरू चढ्नुपर्दछ। तर तपाईले बोक्नुहुने कुरामा सावधान हुनुहोस् किनभने अन्तहीन बाँदर उनीहरूले मठको सुरक्षा गर्छन् र तिनीहरूलाई तपाईंसँग भएको अलिकति लापरवाहीका साथ पक्रिनेछन्।
नगापालीको समुद्री तट, कम ज्ञात बर्मा
तार्किक रूपमा, एउटा देशमा बर्माको आकार त्यहि शानदार समुद्र तट हुनुपर्‍यो। तपाईंको मामला मा, तिनीहरू क्षेत्र मा छन् नगापाली। पर्यटनले उनीहरूलाई शोषण गर्न थाल्यो, तर तिनीहरू अझै निश्चित कुमारी हावा कायमै राख्छन्। उनीहरूको मजा लिई धेरै यात्रा पछि तपाईंलाई आराम गर्न अनुमति दिनेछ।
यो कहिले राम्रो हुन्छ एशियाई देशको लागि यात्रा गर्न
बर्मामा विभिन्न प्रकारका मौसमहरू छन्। तर, सामान्यतया, यसले प्रभुत्व जमाउँछ दक्षिण पूर्व एशियाई। त्यो हो, तपाइँ आफैंलाई भेट्टाउन सक्नुहुन्छ दुई मौसम: भिजेको र सुख्खा। पहिलो, बरसात हुनुको अलावा मानसून seasonतु हो र यो हिसाबले तातो छ त्यसैले हामी यसलाई सिफारिस गर्दैनौं।
यो उत्तम छ कि तपाइँ सुक्खा मौसममा देश भ्रमण गर्नुहोस्, विशेष गरी डिसेम्बर र मार्च बीचमा। जे होस्, यी महिनाहरूको पहिलो उच्च मौसमसँग मिल्दछ, जसको लागि मूल्यहरू अधिक महँगो हुन्छन्। यी सबै कारणहरूको लागि, हामी तपाईंलाई जनवरी र मार्च बीच बर्मा यात्रा गर्न सल्लाह दिन्छौं।
बर्मामा के खान गर्ने
कुनै देशलाई चिन्ने सब भन्दा राम्रो तरीका भनेको यसको ग्यास्ट्रोनोमी चाख्नु हो। कम्तिमा एउटा यात्रा अपूर्ण छ यदि तपाईं यसलाई कोशिस गर्नुभएन भने। बर्मेली खाना यसको छिमेकीहरूले धेरै प्रभावित गर्दछ चीन, भारत y थाईल्याण्ड। फलस्वरूप, चावल यो उनीहरूको भाँडामा मूलभूत तत्त्व हो र कच्चा माल पनि बाहिर खडा हुन्छ अंडमान समुद्री माछा.
पहिलो को रूप मा, तिनीहरू एक तैयार भद्र चामल वा एक कम्प्याक्ट मासको रूपमा प्रस्तुत गरियो जुन यसको विविधतामा एनजीए चेइक यो बिहानको खाजामा लिइएको हो। त्यस्तै, चाउचाउ o नूडल्स तिनीहरू एक आवश्यक घटक हो।
सामान्य डिशको बारेमा, सूपहरूभनिन्छ हिंग्योयद्यपि अम्लीय भनिन्छ chiyei। यसको अंशको लागि, एनजीपीआई तिनीहरूले सब्जी र चामल संग खाए कि किन्न प्रण छन्; को कुष्ठरोग एक चिया पात सलाद हो, जो पनि बन्दकोसी र बदाम, र छ hto-hpu न्यू यसले पोर्च वा कुखुराको साथ छोलाको पिठो बनाउँदछ र पेपरिका र सुगन्धित जडिबुटीको साथ अनुभवी हुन्छ।
तर बर्माको राष्ट्रिय पकवान हो मोहिंगा, केही चामल चाउचाल माछा र प्याज शोरबा साथ। तपाईं तरकारीहरू, उमालेको अण्डा, फ्राइड मसूर र खस्ता कुराहरुको प्रकार पनि लिन सक्नुहुन्छ।
तर तपाईं पनि प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ बर्मी करी, जो लगभग सबै चीजहरूको साथ हुन्छ, यद्यपि यसमा सँधै चावल, तरकारीहरू, जडिबुटीहरू, टोफू र चटनी हुन्छ एनजीपी तिमी। अन्तमा, नान gyi thoke यसले कुखुरा, काटिएको माछा, उमालेको अण्डा र बीन स्प्राउट्सको साथ ठूला फ्राईड नूडल्सहरू देखाउँदछ।
तपाईंको विशिष्ट खाना समाप्त गर्न, तपाईंसँग बर्मामा मिठाईहरू पनि छन्। वास्तवमा, एक लिनुहोस् केक संग चिया यो देशका बासिन्दाहरूको बीचमा परम्परा हो। सबैभन्दा लोकप्रिय हो मौन, एक प्रकारको रोटी किसमिस र नरिवलको साथ मीठो, र बेन मौंन (हामी यो मान्छौं) मौन मतलब केक जस्तै केहि), जो शराबी र मीठो केक हुन्।
जहाँसम्म, यदि तपाईं फल चाहानुहुन्छ भने, तपाईंसँग केहि यस्तो छ जुन तपाईं स्पेनमा देख्नुहुने छैन। उदाहरण को लागी, उहाँलाई डुरियन। तर हामीले तपाईंलाई चेतावनी दिनुपर्दछ कि यसको गन्ध ठीक रमाईलो छैन। वास्तवमा, त्यहाँ उसलाई बोलाउनेहरू पनि छन् "संसारमा बदबूदार फल"। जे होस्, एक पटक तपाईं त्यो प्रभाव पार गर्नुभयो, तिनीहरूको मासु एक अजीब स्वाद छ।
जब यो पेय पदार्थहरु को लागी आउँछ, चिया यसको बिभिन्न प्रकारमा यो राष्ट्रिय हो। तर बर्मी पनि धेरै खान्छ बियर र पनि खातिर। यस क्षेत्रको सबै भन्दा मूल निवासी छ टुबा, एक मादक पेय जुन नरिवल पामबाट प्राप्त गरिन्छ।
बर्मा कसरी पुग्ने
एसियाली देश मा प्रवेश गर्न उत्तम तरिका माध्यम हो यांगुन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट। तिनीहरूसँग यो पनि छ मन्डलिया y नायपिडि, तर विदेशबाट उडानहरू विरलै छन्।
एक पटक बर्मामा, शहरहरू बीच जानका लागि सबैभन्दा उत्तम रेखाहरू हुन् बस। तपाईं ती सबै प्रकारका पाउन सक्नुहुनेछ, एयर कन्डिसनको साथ आधुनिक गाडीहरूबाट करीव passengers० यात्रीहरूको सानो भ्यानसम्म। तपाईसँग पनि सम्भावना छ ड्राइभरको साथ कार भाडामा लिनुहोस्, तर यो सस्तो छैन। साथै, यात्रा गर्न अर्को तरिका प्रयोग गरीरहेको छ जहाजहरू त्यो देशको नदीहरुमा बग्छ।
अन्तमा ठूला शहरहरूको भ्रमण गर्न तपाईसँग पनि छ शहर बसहरु। तर अधिक विशिष्ट छन् रिक्शाएशियाको यस क्षेत्रमा यती लोकप्रिय। धेरै मौलिक छन् साइडकारहरु र तुइन बेन, तीन पाels्ग्रासँग र यस्तै tuk-tuk de थाईल्याण्ड। यद्यपि मूल निवासीहरूको लागि शहरी यातायातको रुचाइएको साधनहरू छ बाइक। सबै ठूला शहरहरूमा तपाई उनीहरूका लागि भाँडा पोइन्टहरू भेट्टाउनुहुनेछ।
अन्तमा, बर्मा एक सुन्दर देश हो जुन अझै ठूलो टूर अपरेटरहरूले धेरै शोषण गरेको छैन। जे होस्, यो पहिले नै परिवर्तन हुँदैछ किनकि यसले तपाईंलाई प्रस्ताव गर्दछ अद्भुत मन्दिरहरू y एक प्रफुल्लित र दर्शनीय प्रकृति। के तपाईं एशियाई देश चिन्न हिम्मत गर्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » बर्मा